भारतले सगरमाथाको उचाई नाप्न खोज्नु नेपालप्रतिको पछिल्लो षढ्यन्त्र ! « Surya Khabar
भारतले सगरमाथाको उचाई नाप्न खोज्नु नेपालप्रतिको पछिल्लो षढ्यन्त्र !
काठमाडौं । सर्भे अफ इन्डियाले सगरमाथाको उचाइ पुनः मापन गर्ने जनाएको छ। भारतको हैदरावाद शहरमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत वर्षको भूकम्पपछि सगरमाथा उचाइको विषयमा वैज्ञानिक समुदायको एक पक्ष हुँदै उठाएको आएको शंका निवारण गर्नका लागि उचाइ मापन गर्न खोजिएको जनाएको छ। सर्भे अफ इन्डियाले वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पुनः मापन गर्न लागेको जनाएको छ।
तर नेपाली पक्षले भने हालसम्म यस विषयमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आइनसकेको जनाएको छ।
‘मौखिक रुपमा प्रस्ताव आएको हो । त्यस विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन,’ नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बिसीले भने, ‘प्रस्ताव कस्तो आउँछ त्यस विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने छ ।’
सर्भे अफ इन्डिया स्थापना भएको २ सय ५० वर्ष पुगेको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालको सहभागिता छैन।
सर्भे अफ इन्डियाको सर्भेयर जनरल स्वर्ण सुब्बा रावले भारततर्फबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएको र यो प्रयास आगामी महिनाबाटै शुरु हुने जनाएको पिटिआइले जनाएको छ ।
‘हामीले विदेश मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरिहेका छौ, नेपालका सर्भेयर जनरल यहाँ(हैदरावाद सम्मेलन)मा आएको भए उहाँसँग कुराकानी हुने थियो । मलाई के लाग्छ भने हामी दुई महिना(आरोहण) टिम बनाउन सक्छौं,’ रावलाई उदृत् गर्दै पिटिआइले लेखेको छ । भारतमा अंग्रेजको उपनिवेश रहैक समयमा सर्भे अफ इन्डियाले विश्वका सर्वोच्च शिखर नेपालका रहेको भन्दै त्यसलाई पि एक्सआइ भनेका थिए । तर पछि त्यसका नामसर्भे अफ इन्डियाका तत्कालीन सर्भेयर जनरल जर्ज एभरेष्टको नाम राखिएको थियो । त्यसका उचाइ समुद्र सहतबाट ८ हजार ८ सय ४८ मिटर मापन गरिएको थियो । भारत बेलायत स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतको बिएस गुलाठीको नेतृत्वमा सन् १९५२ मा नेतृत्वमा मापन गर्दा पनि
नागरीकको समाचारका अनुसार नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्नका लागि सन् २०११ को बजेटमा सरकारसँग एक करोड रुपैया माग गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चभन्दा काटेको थियो । विभागले जिपिएस बेस स्टेसन निर्माण र दुर्गम क्षेत्रमा जाने प्राविधिक तथा कर्मचारीका भत्ताका लागि सो रकम माग गरेको थियो।
विभिन्न स्थानमा उपकरण राखेर प्राप्त भएको कोरा उचाइ मापनलाई गुरुत्वकार्षणसहितका विभिन्न विषयले उचाइमा पार्ने प्रभावलाई हटाएर वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने गरिन्छ । ‘कोरा तथ्यांकलाई कसरी कुन प्रक्रियाबाट प्रशोधन गरियो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक समुदायलाई चित्ता बुझ्दो जवाफ दिने गरि मापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक बिसीले भने ।
असीको दशकमा नाम्चेमा बेस स्टेसन राखेर, लुक्ला, अपर राउझे, लोअर राउओमा उपकरण राखेर मापन गरेको थियो।